तनाव र PTSD - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
मारी डी बाट प्रशंसापत्र
१ 1997 XNUMX In मा, मैले मेरो व्यस्त मस्तिष्कको मनन गर्न र शान्त गर्न मद्दत गर्न डेभिड उपकरणमा सत्र प्रयास गरें। मैले ओटावामा यो प्रयास गरे पछि मेरो आफ्नै खरीद गरें। मलाई शुमानको अनुनाद सत्र र एउटा डीप डेल्टा सेसन मनपर्‍यो (निद्राका लागि।) मैले यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गरें किनभने मलाई यो सृजनात्मकता र समस्या समाधान गर्न, नयाँ चीजहरू सिक्न, आत्म-सम्मोहन गर्ने आदिको लागि उत्कृष्ट छ।
त्यसपछि २०० 2006 मा, म घरको आक्रमणको सिकार भएँ र PTSD बाट पीडित भएँ। मैले फरक समाधानहरूको प्रयास गरे, तर कसैले पनि साँचो राहत ल्याएन। म मेरो प्रिय gizmo को बारे मा भूल थियो। महिनाहरू वर्षमा परिणत भयो र जीवन तलतिर बढेको। धेरै धेरै निराशाजनक भावना ... जो सामान्य छ यदि यो उपचार गरिएको छैन भने ...
त्यसोभए मैले नयाँ DAVID मोडल खरीद गरें र C4 सत्रहरू पत्ता लगायो ... यसको लागि म आभारी छु! चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव अवस्थित छैन जब म यसलाई प्रयोग गर्दछु। म मेरा सत्रहरू धार्मिक रूपमा गर्दछ किनकि यसले मेरो मुड / स्वभावमा यस्तै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। PTSD बाट पीडित जो कोहीले पनि यो प्रयास गर्नु पर्छ। यी उपकरणहरू पहिलो प्रतिक्रियाकर्ता र सैनिक कर्मचारीहरूको लागि उत्कृष्ट हुनेछ।
Dave S. धन्यबाद यी AVE उपकरणहरू बनाउन र सिद्ध गर्नका लागि। तिनीहरूले वास्तवमै मेरो जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन गरेका छन्।
डोरोथी जोनबाट प्रशंसापत्र
राम्रो नयाँ वेबसाइट। यो स्पष्ट छ कि धेरै समय र प्रयासले यसलाई सिर्जना गर्‍यो। मलाई विशेष गरी अनुसंधान खण्ड मनपरायो - पुरानो साइटमा फेला पार्न गाह्रो भयो। Kudos सबैलाई सम्मिलित छ। नयाँ साइट राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ मन जिउँदो.
म तपाईंलाई यो पनि भन्न लेख्दै छु कि म ब्रेन बूस्टर # १ प्रोग्राम प्रयोग गर्दै छु तनाव नियन्त्रणको लागि र नतिजा चमत्कारीको केही छोटो छैन। म मेरो उमेरको आमाको हेरचाहबाट अत्यन्तै तनावग्रस्त छु किनकि केहि मिनेट भन्दा बढी समय बस्न पाउँदैन त्यसैले ध्यान वा उपकरण प्रयोग गर्ने कुनै मौका छैन। मैले बिहान यो प्रयोग गर्न सुरु गरें जब म पहिलो उठें र एक हप्तादेखि १० दिन भित्र मैले महसुस गरें कति शान्त महसुस गरें। यो तनाव बाट २ भावनात्मक बिच्छेदन पछि मेरो लागि जीवन बचाउने हो।
र्यान्डी कोलम्यानबाट प्रशंसापत्र
सेप्टेम्बर 8, 2014
"म एक सैन्य दिग्गज हुँ जसले विगत १ 15 बर्षदेखि PTSD सँग कुस्ती खेलेको छ। हरेक रात, म युद्धको फ्ल्याशब्याकको साथ ब्यूँझन्थें, बम विस्फोट भएको सुन्दा, ट्याks्की र तोपखानामा र शवहरू देखे। म पसिना ब्यूँतिन्छु र अक्सर चिच्याउँदछु। मेरो डाक्टरले मलाई रातको डरको साथ निदान गरे। मेरी श्रीमतीले सुझाव दिए कि म ALERT "मस्तिष्क प्रशिक्षण" प्रणाली प्रयोग गर्छु। हामीले त्यसलाई खरीद्यौं र २२ मिनेट (जुन यो प्रोटोकल हो) को लागी प्रत्येक दिन प्रयोग गर्न थाल्यौं। एक महिना पछि, म अझै पनि रात डरहरू थिए, तर कम बारम्बार। 22० दिन नपुगुञ्जेल मैले कार्यक्रममा निरन्तरता दिएँ। बिस्तारै, रातको डर डरलाग्दो भयो र कहिले फिर्ता आएन। अब यो एक बर्ष भएको छ, र म पछि एक रात आतंक छैन। ALERT को मद्दतले, म PTSD बाट स्वाभाविक रूपमा निको भयो, औषधिविना। यो एक उपयोगी प्रणाली हो जुन प्रयोग गर्न सजिलो र प्रभावकारी छ। ”
Jessie पी बाट प्रशंसापत्र।
"मेरो छोरी गम्भीर PTSD को साथ अटटिस्टिक छ। हाम्रो स्थानीय स्कूल जिल्ला मा, grad कक्षा को कक्षा 6th मा over बर्षमा आघात भएको पछि, मेरी छोरी मेरो आफ्नै घरमा कैदी भयो। उनको गम्भीर भावनात्मक र सामाजिक चिन्ताको कारण हामी कतै जान असमर्थ भयौं। हामी सबै कैदी थियौं। ALERT मस्तिष्क प्रशिक्षण प्रणाली हाम्रो अन्तिम आशा थियो किनकि औषधीहरू र थेरापी बेकार थियो। Days दिन भित्र म उनको आचरणमा एक आरामदायी देख्न थालें। उनी किनमेल गर्न चाहन्थिन् र कारको अगाडीको सीटमा बस्न सक्षम थिइन्। २० दिन सम्ममा हामी उनलाई बुद्धिमत्ता दाँत हटाउनका लागि अस्पताल लैजायौं। Days० दिनमा हाम्रो छिमेकी र साथीहरूले उनको अनुहार सुविधाहरू र भोकलाइजेशनमा स्पष्ट भिन्नता देख्न सक्थे। ALERT प्रयोग पछि त्यहाँ एक अँध्यारो छ जुन हाम्रो छोरीबाट उठेको छ। हामीले लामो यात्रा गर्नु पर्दछ तर हामी अब सकारात्मक दिशामा जाँदै छौं। म पनि ALERT प्रयोग गर्दैछु र यसले तनावलाई कम गर्न मद्दत गरेको छ जुन विगत years बर्षदेखि मेरो जीवन भरी रहेको छ। सतर्कता हाम्रो जीवनको एक लामो हिस्साको रूपमा आवश्यक रहनेछ। "
मार्था Nygaard बाट प्रशंसापत्र
न्यू मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका
"द डेभिड प्रसन्न अचम्मको छ म परिवर्तन देखीरहेको छु। मैले हिजो नै सीईएस प्रयोग गरें र वाह, यसले मलाई शान्त गर्यो! को सबै सुविधाहरु प्रसन्नता प्रो अविश्वसनीय हो। तपाइँको उत्पादन को लागी धन्यवाद। "
“म सँधै एक पटक जान्छु, जानुहोस्, मान्छे को प्रकारको। म एक सामान्य प्रकारको एक व्यक्तित्व हुँ, र धेरै जसो धेरै घाइते हुन्छ। म धेरै वर्ष को लागी पेट समस्याहरु थिए, र त्यसपछि मलाई ईर्ष्याको साथ एक वास्तविक ठूलो समस्या हुन शुरू भयो। म जिद्दीको थियो कि ईर्षबको किसिमको हुन थालेको थियो र यति सजिलै टाढा जाने छैन। यो एक दिन यति खराब थियो कि २ घण्टा दु: ख पछि म अन्तमा आपतकालीन कोठामा गएँ। त्यहाँका डाक्टरहरूले मलाई सबै प्रकारका परीक्षणहरू आदि लगाए र कुनै गलत फेला पार्न सकेनन्। तिनीहरूले मलाई सामान्य कंधेको स्रोगहरू र केही प्रकारको एन्ट्यासीड्सको 'ककटेल' को साथ घर पठाए।
करेन सेलिकबाट प्रशंसापत्र
बेल्लेभिले, ओन्टारियो, क्यानाडा
“म हप्तामा एक वकिल हुँ र सप्ताहन्तमा म एउटा पत्रिकाको स्तम्भकार हुँ। मेरो दिमाग 'डाउन टाइम' को धेरै प्राप्त गर्दैन। वर्षौंको लागि, मैले तनाव मुक्तिका लागि केही प्रकारको ध्यान कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रयास गरें। समस्या यो थियो, मैले आफ्नो मस्तिष्कलाई ड्युटीबाट बाहिर जान सकिन। ध्यान बो-oo- रिंग थियो, र मैले सधैं आफैंमा अफिसको काम वा मेरो मन्त्राको सट्टामा लेखमा प्रगति भइरहेको देखिरहेछु। ध्यानका हरेक प्रयासहरू एक हप्ता भित्रमा साइडसाथ गिराउँथे।
यो प्रकाश र ध्वनि मेसिनको प्रयोग गरेर पूरै भिन्न Ballgame हो। छविहरूको क्यालिडोस्कोपको साथ, श्रवण उत्तेजना र HRV सुविधा, मेरो विचार भटकिरहेको देखि राख्नको लागी पर्याप्त छ। म वास्तवमा मेरो डेभिड प्याराडाइज टीसीसँग साँझमा वा साताको अन्तामा आधा घण्टा अल्फा वा थेटामा बसेर हेर्छु। यो रमाइलो छ जब म यो गरिरहेको छु, कष्टकर र बोरिंगको सट्टामा, र म मानसिक रूपमा पछि स्फूर्ति महसुस गर्छु।
मैले DAVID खरीद गर्नु अघि तपाईंको प्रतिस्पर्धीको सस्तो मोडलमध्ये एकको प्रयास गरेको थिएँ। यसले काम गर्यो, तर राम्रो पनि छैन। मलाई डेभिडको मनपर्दछ HRV सुविधा, जसले मलाई मेरो श्वास फोकस गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै ती सबै योग प्रशिक्षकहरू सधै सिफारिस गर्छन्। श्रवणयोग्य मुटुको धाराले मलाई इन्ट्रीको साथ गति दिनको लागि केही दिन्छ, एक शुरुआत संगीतकार जस्तो कि एक मेट्रोनोम प्रयोग गर्दै। म पनि DAVID को मस्तिष्क को विभिन्न पक्षहरु लाई विभिन्न दरहरुमा उत्प्रेरित गर्ने क्षमता लाई मन पराउँछु, केहि प्रतिस्पर्धीको उत्पादनहरु प्रदान गर्दैन।
म राती सुत्दा पनि म प्रायः डेल्टा प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्दछु। मलाई सुत्ने बेलामा कहिले पनि सुत्ने समस्या भएन, तर रातको समयमा बारम्बार जागा रहन्थें र निद्रामा अलि अलि गाह्रो भइरहेको छ। मैले DAVID को प्रयोग गर्न सुरु गरेदेखि यो समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्यो। म प्राय: कम उठ्छु, र म सामान्यतया केही मिनेटमा सुत्न सक्दछु। मलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो मस्तिष्कलाई कसरी फेरि सुस्त गर्ने र निन्द्रालाई पुनः स्थापना गर्ने बारे पुनः सिकाएको छु।
धेरै बर्ष सम्म मैले प्रकाश र ध्वनि मेसिनहरू प्रयोग गर्नु अघि, मैले याद गरें कि मैले यस्तो सपना देख्दछु - वा यदि मैले गरेको थिएँ भने, मलाई बिहान त्यसो गर्ने सम्झना छैन। अब म धेरै सपना देखिरहेको छु, र म ब्यूँझनु भएपछि मेरा सपनाहरु सम्झना गर्दै छु। म निश्चिन्त निद्रा बान्कीमा फर्किएको छु जुन एक बच्चा जस्तो निदाएको जस्तो लाग्छ।
मलाई मेरो डेभिड मन पर्छ र निद्रा सम्बन्धी समस्या भएका वा उच्च तनाव पेशा भएका जो कोहीलाई यो सिफारिस गर्दछु। "
डारेन बानफोर्डबाट प्रशंसापत्र
मार्च 21, 2004
"भर्खरै तपाईलाई थाहा दिन चाहानुहुन्छ कि मेरो डेभिडले मेरो लागि कसरी प्रशंसापत्रको साथ काम गरिरहेको छ तपाईले जे होस् प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
डेभिडसँग मेरो पहिलो अनुभव आधा घण्टाको सत्र थियो मन जिउँदो मलाई संग सेट अप थियो। सत्र पछि मैले कुनै पनि आतिशबाजी वा साधारणबाट बाहिरको कुनै अनुभव गरेन जुन मलाई यी उपकरणहरू मध्ये एउटा खरीद गर्न चाहान्छ।
जब म आफ्नो एर्रान्डहरू गरेर र मेरो सत्रमा फर्केर घर फर्कें मन जिउँदो मैले झोला लाग्ने निर्णय गरें। म २ घण्टा सुत्थें र वास्तवमै राम्रो महसुस गर्दैछु, मैले शान्तिमय र निर्मल महसुस गरें। यो तब मैले महसुस गरें कि हुन सक्छ यस डेभिडमा केहि छ। मैले तुरून्त फोन गरे मन जिउँदो र न्यान्सीसँग कुरा गरें, मैले उनलाई थाहा दिएँ कि म डेभिड किन्न रुचिमा छु र म यसलाई लिन यहाँ आउँदैछु।
म मेरो DAVID को प्रयोग गरिरहेको हुनाले म धेरै रमाइलो महसुस गर्छु र आफु र वरपरको संसार संग शान्तिमा छु। अब मेरो डेभिड प्रयोग गर्न यो मेरो लागि दोस्रो प्रकृति भएको छ जब म बिहान उठ्छु मेरा दिन सुरु गर्न। मैले यो पनि याद गरें कि मेरो मांसपेशी, हड्डी वा कार्टिलेज पीडा धेरै कम भएको छ, किनकि म धेरै आराम पाएको छु र तनावपूर्ण र उदासीन छैन। यस उपकरणको उपयोगले दिर्घकालिन फाइदाहरू के हुनेछ भनेर म हेर्न अत्यन्तै उत्साहित छु, किनभने अल्पकालिक फाइदाहरू मेरो लागि कत्ति गहन र लाभदायक थिए। ”
लुइस फेडरलबाट प्रशंसापत्र
चार्लोट, उत्तरी क्यारोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका
नोभेम्बर 20, 2003
“तपाईंको कुटिल पतिलाई डेभिड प्याराडाइजसँग सुत्न दिनुहोस्!
वास्तवमा, मेरो श्रीमान् हिजो राती सुत्न सकेन (र ओह केटो ... हामी जान्दछौं कि कसरी तिनीहरू विरामी हुन सक्छन् जब उनीहरू सुत्न सक्दैनन्)। ऊ एक किसिमको चिन्तित थियो किनकि हामी अहिले हाम्रो कन्डोमा केही कोठाहरू रिटायर गर्दैछौं। तपाईंले मेरो श्रीमान्लाई गत रात साढे १२ बजे देख्नु भएको थियो, उहाँ आफ्नो सुत्ने कोठाबाट बाहिर निस्केर, यस टाइल कामका वरिपरिका सबै प्रकारका चिन्ताहरू गडबडी गर्दै। उनको टाउकोमा बकबकको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो सम्पूर्ण पतिले मेरो श्रीमानसँग कुराकानीमा संलग्न रहेको थियो, र एक सबै भन्दा राम्रो काम गरी सबै प्रकारका समस्याहरू आउनेछ भनेर विश्वस्त पार्दै (संसार बिग्रँदै गइरहेको थियो, टाईल्स समावेश सहित)।
ठीक छ, म उहाँलाई मिसिन संग सेट। यो उनको पहिलो पटक थियो। खैर, भगवान द्वारा ... ऊ निदाउन सक्षम थियो। आज बिहान उनले मलाई भने कि यो मेसिन एकदम प्रभावशाली छ। ऊ बिस्तारै ला ला लैन्डमा बिस्तार हुँदै जाँदा उसको चिन्तित मन शान्त भयो। भोलिपल्ट, मेरो श्रीमान् यति प्रभावित हुनुभयो कि उहाँ एक पटक नबिताई ऊ कत्ति छिटो निदाउनुभयो, सामान्यतया।
टाइलको काम एकदम राम्रोसँग गयो। उसले अर्को दिन सक्यो र यो सुन्दर देखिन्छ। म डेभिड फेरि मेरो स्वीटीमा प्रयोग गर्नेछु, तपाईं त्यसमा भर पर्न सक्नुहुन्छ। "
डोन विल्सनबाट प्रशंसापत्र
एनाकोर्टिस, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका
मार्च 21, 2002
“बितेको वर्षदेखि मैले डेभिड प्रयोग गरें ध्यानको लागि सहायता गर्न, संज्ञानात्मक क्रियाकलाप सुधार गर्न, दन्त कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन र आराम गर्न सहयोग पुर्‍याउन। यस समयमा, म अरू र म दुवै किशोर र वयस्क मा न्युरोफिडब्याक प्रयोग गर्छु।
जबकि न्युरोफिडब्याक सत्रहरू प्रभावकारी छन्, डेभिड पनि धेरै उपयोगी छ। एक हाई स्कूल सेटिंग्समा, जहाँ मैले धेरै चीजहरू गर्नुपर्दछ, DAVID ले ठूलो जनसंख्याको साथ काम गर्ने सम्भावना सिर्जना गर्दछ। यो प्रयास गरेका विद्यार्थीहरूले यसलाई तुरुन्त मन पराउँछन् र परिणामहरू परम्परागत न्यूरोफिडब्याक सत्रहरू जत्तिकै राम्रो देखिन्छ। मैले वयस्कहरूको साथ काम गरें कि मौसमी असरदार डिसआर्डर (SAD) भएको थियो र हप्तामा एक पटक न्यूरोफिडब्याक सत्रहरू पर्याप्त थिएनन्। "
अलेक्स फेररबाट प्रशंसापत्र
डिसेम्बर 4, 2000
“अक्टूबर, १ 1991 XNUMX १ पछि म फ्लोरिडाको मियामीमा अभ्यास गर्दै थिएँ। मुद्दा चलाउनु धेरै तनावपूर्ण हुन्छ र मलाई निदाउन गाह्रो लाग्थ्यो, किनकि म मुद्दाको प्रगति वा भोलिपल्ट खडा हुने साक्षीहरूको गवाहीको बारेमा सोच्ने गर्छु। वास्तवमा, परीक्षण अघि नै म हप्ताहरू राम्रो रातको निद्रा बिना बिताउँथें किनकि मैले मेरो परीक्षण रणनीति र मेरो मुद्दाको कमजोरी र कमजोरीहरूमा ध्यान दिएँ।
भाग्यवस, म एक अखबारको विज्ञापन भेट्टाँ जसले मलाई डेभिड प्रयोग गरेर विश्राम थेरीपी गर्न कोशिस गर्यो। मेरा केहि साथीहरू जस्तो नभई, म दिउँसो कहिल्यै डुलिन सक्दिन। मैले आइतबार दिउँसो o'clock बजे एकाइ परीक्षण गर्दा र झन्डै २० मिनेट पछि उठ्दा मेरो झटका कल्पना गर्नुहोस्। रमाइलो यति गहिरो थियो कि म सजिलै सुत्ने गर्थें। मलाई तुरून्त थाहा थियो कि यस चलाख उपकरणले मेरो स्वास्थ्य बचाउनेछ।
त्यस समयदेखि, मैले यसलाई नियमित तवरले आराम गर्ने र निदाउन प्रयोग गरें, अत्यन्तै तनावपूर्ण परिस्थितिहरूमा पनि। यो एक अचम्मको उपकरण हो र मैले यसलाई धेरै साथीहरूलाई सिफारिस गरेको छु। म भर्खर तपाईको कम्पनीप्रति इमान्दारता व्यक्त गर्न चाहन्थें। "
आन डिमन्नोबाट प्रशंसापत्र
जुलाई 14, 2000
“मलाई मेरी छोरीको स्कूलले एउटा पत्र प्राप्त गर्यो कि उनी ग्रीष्म schoolतुमा पढ्नुपर्दा गम्भीर खतरामा छ भनेर मलाई खबर गरे। उनीले भर्खरको भर्खरको सातवटा गणितको परीक्षालाई असफल गरिन।
क्रिस्टिना १ 14 वर्ष पुराना जुनियर उच्च माध्यमिक विद्यार्थी हुन्। उनी प्रायः आफ्ना विषयहरूको प्राय: उच्च वर्ग औसत कायम राख्छिन्, र अत्यन्त उज्ज्वल र बुद्धिमान युवती हुन्, तर उनी परीक्षा जिटरबाट ग्रस्त छिन्। अहिले सम्म यो कुनै पनि समस्याको विषय बनेको थिएन र वास्तवमा उनले उनको मार्क्सलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पारेन। स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै, केहि चाँडै गर्नु पर्ने थियो।
मैले DAVID लाई अर्डर गरें। क्रिस्टिनाले डेभिडको प्रयोग गर्न जारी राखिन् र दिन, बिहान र साँझ दुईवटा सत्रहरू सुनिन्। र पाँच दिन पछि, उनी विश्वासपूर्वक परीक्षा लिन सक्षम भएकी थिइन, र फेरि राम्रो प्रदर्शन गर्न। भन्नु पर्दैन, उनी गर्मी स्कूलमा भाग लिनुपर्दैनथ्यो। ”
एल। कालिनोव्स्कीबाट प्रशंसापत्र
21 सक्छ, 1998
“म नब्बेको दशकको शुरुदेखि नै ब्रेनवेभलाई उत्तेजित गर्ने मेसिनहरूको बारेमा पढिरहेको थिएँ। मलाई थाहा छ लन्डन स्टक एक्सचेन्जका व्यापारीहरूले उनीहरूलाई उन्मत्त कामका लागि दिन मद्दत गर्न प्रयोग गर्छन्; र यी उत्सुकताका मेशिनहरू मेरो लागि लाभदायक हुनेछन् कि भनेर हेर्न म उत्सुक थिए। अचम्मको कुरा, मैले एडमन्टनमा एउटा स्थानीय कम्पनी भेट्टाएँ: मन जिउँदो!
मैले एउटा अपोइन्टमेन्ट लिएँ किनभने अघिल्लो वर्ष (१ 1996 100)) मा मैले जीवनको शीर्ष १०० सबैभन्दा तनावपूर्ण अनुभवहरू अनुभव गरेको थिए (चाल, बेरोजगारी, शोक, एक ब्रेक-अप र ब्रेक-इन्स, काममा भुक्तानी नपाएको, परिवार) महिनामा अस्पतालमा दुर्लभ रोगको साथ सदस्य, आदि)।
मैले लगभग मेरो नियुक्ति रद्द गरें किनभने त्यस दिन हामी तोडफोड गर्यौं। यद्यपि, डेभ सिभरको डेभिडको रोचक व्यक्तिगत प्रदर्शन, र मेरो मस्तिष्कले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण पछि, म पूर्ण रूपमा आराम पाएँ, हल्का महसुस गरें, र अझै सतर्क! त्यस दिन पछि, म प्रहरीसँग, एक धेरै बचाव गर्ने अभिभावक, र एक दुर्व्यवहारपूर्ण किशोर भ v्गलाई शान्त र दृढ ढandal्गले डरलाग्दो परिस्थितिमा मेरो त्रास वा रीसलाई नबनाईकन व्यवहार गर्न सक्षम भएँ र मैले वास्तवमै आराम गर्न पाए। साँझ को।
त्यो डेभिड मिसिनमा २० मिनेट पछि मेरो पहिलो अनुभव हो र म बिक्री भयो! मेरो DAVID को प्रयोग संग, म यसो भन्न गर्व गर्दछु कि मैले मेरो दिमागलाई तनावको साथ विस्फोट गर्नबाट रोक्दछु, (र यो शाब्दिक रूपमा त्यस्तो हो जुन कहिले काहिं महसुस हुन्छ), जस्तै Prozac जस्ता औषधिहरू प्रयोग नगरी।
कामको अघि म बिहान प्राय: मेरो डेभिड एकाई प्रयोग गर्छु। साथै, यदि म टाउको दुखाइ लिएर घर फर्कें भने यसले मलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ - म वास्तवमै पछि बाहिर गए जस्तो महसुस गर्छु। "
जेम्स ई। डेमन, MD बाट प्रशंसापत्र
Coeur d'Alene, Idaho, संयुक्त राज्य अमेरिका
डिसेम्बर 3, 1997
"डेभिडसँग मेरो अनुभव धेरै फाइदाजनक भएको छ। रिलक्सन प्राप्त गर्न, निन्द्रा जगाउन, र आफ्नै अवस्था, एपिसोडिक एट्रियल फाइब्रिलेशनको उपचार गर्न मैले यो प्रयोग गरेको छु।
पछिल्लो एक अनियमित मुटुको धडकन हो जुन कुनै चेतावनी बिना नै देखा पर्दछ। यस कष्टकर अवस्थाको समाधानका लागि मैले पाएको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको शान्त, मधुरो बत्ती भएको ठाउँमा ढल्नु र मेरो डेभिड खोल्नु र नियमित तालको धडकन सुन्नु हो। यस्तो लाग्दछ कि मेरो आफ्नै मुटु लाई पुनः साधारण प्रोग्राममा १० देखि १ minutes मिनेटमा तालमा फर्काउँदछ।
तपाईको सबै प्रकारको सहयोगका लागि धन्यबाद। "
डिडिएर कम्बटलाडेबाट प्रशंसापत्र
मोन्ट्रियल, क्यूबेक, क्यानाडा
नोभेम्बर 4, 1997
“डेभ, म आशा गर्छु कि तपाईं र न्यान्सीको घर र रमाईलो यात्रा छ। मोन्ट्रियलको भ्रमणको लागि धन्यबाद, मलाई तपाईंको प्रस्तुतिको आनन्द लाग्यो brainwave entrainment.
एलनले मलाई एक डेभिड उपकरण loanण लिएका छन त्यसैले म केही समयका लागि प्रयास गर्न सक्दछु। मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि मलाई यो प्रयोग गर्न एकदम रमाईलो लाग्यो, विशेष गरी अल्फा सत्रहरू। मलाई सामान्यतया ध्यानको बेला जागा रहन धेरै कठिनाई हुन्छ तर मेशिनको साथ, म आफैलाई त्यो आरामदायी अवस्थामा जान दिन सक्दछु र सत्रभर सतर्क रहन सक्छु। यो धेरै सन्तोषजनक छ। के पनि राम्रो छ, के म यो म आफूलाई चाहिएको कुनै पनि समय मा प्राप्त गर्न सक्दछु, मेशिन बिना, किनभने मलाई थाहा छ कि कसरी त्यो महसुस हुन्छ 'राज्यमा हुन। जिज्ञासाको बाहिर, म बायोग्राफ प्रणालीको साथ धेरै सत्रहरू रेकर्ड गर्दैछु। म हेर्न चाहन्छु कि मेरा ईईजी ट्रेसहरूमा के परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित हुनेछन्। ”
सी। डेविड रिडरबाट प्रशंसापत्र
जुलाई 30, 1993
“तपाईको सबै दयालु र सावधानीका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। म तपाईंलाई भन्न शुरु गर्न सक्दिन (जब सम्म म करीव २० पृष्ठहरूको लागि जारी राख्छु) मलाई DAVID लाई कती माया छ, र यसले मलाई मेरो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गरिरहेको छ।
मँ मस्तिष्क र दिमाग सिम्पोजियममा तपाईलाई भेट्न पाउँदा म कत्ति भाग्यशाली छु, र तपाईको व्यावसायिकता र तपाईको उत्पादनको भावनाबाट प्रभावित भएको कारण मैले मेरो दिमागको मेसिनमा खर्च गर्ने अपेक्षा गरेको दुबै पैसाको शेलिंगमा घायल भयो। माफ गर्नुहोस्, यो लेख्न र तपाईंलाई यो बताउन धेरै समय लाग्यो कि अहिले यस मेसिनमा मूल्य राख्नसमेत गाह्रो छ – म यससँग बिदा छुट्टिदिन विचार गर्दिन। ”
Glenn Conroy बाट प्रशंसापत्र
स्वास्थ्य सेवा विकास एसोसिएट्स इंटरनेशनल, Inc.
नोभेम्बर 3, 1992
"म तपाइँलाई बताउन एक क्षण लिन चाहान्छु म मेरो नयाँ डेभिडको बारेमा कत्ति उत्साहित छु। मैले सुरुमा एकाईमा प्रयास गरें जुन मेरो एक साथीले गरेको थियो र यति प्रभावित छ कि मैले मेरो अर्डरलाई फ्याक्स गरें मन जिउँदो र दुई दिन पछि म आफ्नै DAVID थियो। म डेभिड एक दिनमा तीन पटक प्रयोग गर्दछु र मलाई यो मनपर्दछ। यसले मेरो आराम गर्ने क्षमतालाई बृद्धि गरेको छ, मलाई अझ राम्रोसँग निद्रामा पार्न र धुम्रपान छोड्न मद्दत गरेको छ। मैले डेभिडसँग यस्तो ठूलो अनुभव पाएको छु कि आज मैले ओएसिसलाई मात्र आदेश गरें।
तपाईंको कम्पनीको एक अद्भुत उत्पादन छ र तपाईं पनि टेलिफोनमा धेरै रमाइलो र सहयोगी हुनुभयो। तपाईंको DAVID मलाई चाँडै पाउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन्छु। ”
रोबर्ट जोन फिशरबाट प्रशंसापत्र
मन टेलिभिजन र संगीत उत्पादनको राज्यहरू
स्कारबोरो, ओन्टारियो, क्यानाडा
फेब्रुअरी 10, 1992
“मैले डेभिडलाई पहिलो दर उत्पादन फेला पारे। मैले साना बच्चाहरू देखि बृद्ध नागरिकहरू, एक चिकित्सक लगायत मानिसहरूका विस्तृत श्रृंखलामा तीस भन्दा बढी निःशुल्क सत्रहरू गरिसकें। सबै सहमत छन् कि अनुभव धेरै आराम र अक्सर प्रेरणादायक हो। बधाई छ! "